करिब एक बर्ष अघिको त्यो घटनाले लिएको रहेछ अहिले ६ जनाको ज्यान , के थियो त्यो घटना? यस्तो सम्म पो भएको रहेछ ! – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र २६, २०७८ समय: २०:३७:३६
ह’त्या ग’र्न खोज्दा विपिन र गोमा भागेका थिए । उनीहरुको ल’खे’टेर ह’त्या ग’रे’को बयान लोकबहादुरले दिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । त्यसपछि घरमा बसेकी ८४ वर्षीया पार्वती कार्कीको पनि ह’त्या गरेका थिए । बुद्धमान कार्की कान नसुन्ने भएकाले केही थाहानपाएकाले छा’डि’दि’एका थिए ।काठमाडौँ । संखुवासभाको उम्लिङमा एकै परिवारका ६ जनाको सामूहिक ह ‘त्याका आरोपी लोकहादुर काकीले पीडितमध्ये एकमाथि ह ‘त्याको आशंका एक वर्ष अघि देखि गरेको खुलेको छ । प्रहरीसँगको बयानमा लोकबहादुरले काका पर्ने तेजबहादुरले एक वर्ष अघि आफ्नी आमाको ह त्या ग ‘रेको आशंका गरेको बयान मार्फत भनेका छन् ।
ह’त्या ग’र्न खोज्दा विपिन र गोमा भागेका थिए । उनीहरुको ल’खे’टेर ह’त्या ग’रे’को बयान लोकबहादुरले दिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । त्यसपछि घरमा बसेकी ८४ वर्षीया पार्वती कार्कीको पनि ह’त्या गरेका थिए । बुद्धमान कार्की कान नसुन्ने भएकाले केही थाहानपाएकाले छा’डि’दि’एका थिए
Last Updated on: September 11th, 2021 at 8:37 pm